February, 09-2015 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Xukuumada cusub ee uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, kadib markii ay heshay 191 cod, halka 22 ay diiday.
Kulanka Baarlamaanka oo ahaa mid aan caadi aheyn ayaa ku furmay 213 Xildhibaan, iyadoo Gudoomiye Jawaari oo shir gudoominayay uu ugu horeyn ku wargeliyay Xildhibaanada inay cod u qaadaan in shaqada la sii wado iyo in tacsida loo baajiyo, kadib markii la dilay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay ayaa ka codsaday Xildhibaanada inay ansixiyaanXukuumada, waxaana kadib Gudoomiyaha uu ku dhawaaqay in cod loo qaado, iyadoo Xildhibaanada oo fadhiyay lix saf ay codka gacan taag ah u qaadeen.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari oo gaba gabadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in 191 Xildhibaan ay codka kalsoonida siiyeen Xukuumada, 22 Xildhibaana ay diidan, mana jirto cid ka aamustay, waxaana Gudoomiyuhu cadeeyay in Xukuumada ay ansax ah oo ay heshay codka kalsoonida.
Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Qaranka Avv. Ceydiid Ilka xanaf ayaa dhaariyay qaar ka mid ah Wasiiradda, Wasiir kuxigeenada iyo Wasiiru dowlayaasha, kuwaasoo Ku dhaartay Kitaabka Quraanka Kariimka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa u mahad celiyay Baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida ay siiyeen, waxaana uu balan qaaday in Xukuumaddiisa ay wax ka qaban doonto xaalada guud ee dalka.
Labo jeer oo hore ayuu Ra’iisul Wasaaruhu ku fashilmay inuu codka kalsoonida ka helo, kadib markii uu Golihiisa Wasiirada ku soo daray Wasiiro lagu muransanaa, taasoo keentay inuu la laabto oo uu soo dhiso Gole Wasiiro ka kooban 20-xubnood, hase ahaatee uu golahaas uu u baahday inuu ku soo dhameystiro 10- cisho oo ay ugu dambeyn Xildhibaanada ogolaadeen.
Dadka odorasa siyaasada ayaa sheegaya in kadib 90 cisho oo aan dalka Xukuumad shaqeysa ka jirin tan iyo wixii ka dambeeyay khilaafkii Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaarihii hore C/wali Sheekh Axmed dhamaadkii sanadkii hore, waxaa Xukuumaddan cusub sugaya howlo culus oo ay u baahan tahay inay ka gudubto.
Howlaha ugu waa weyn ee sugaya waxaa ka mid ah ammaanka, arrimaha federaalka, la dagaalanka musuq maasuqa, afti u qaadista dastuurka iyo dib u habeyntiisa, gaarista barnaamijka hiigsiga cusub ee sanadka 2016 ee la doonayo in dalka doorasho xor ah ka dhacdo iyo arrimo kale.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ah markii labaad oo uu jagada Ra’iisul Wasaare dalka ka qabto, marka loo eegana waayo aragnimo ayuu u leeyahay is qab qabsiga iyo khilaafka ka soo kala dhex gala Madaxweyne iyo Ra’iisul Wasaare oo badanaaba ahaa waxyaabihii ragaadin jiray dowladdihii KMG ah, waxaana uu qudhiisa isku casilay, kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2010-kii.